Ancelotti Oo Calaacal Miciinsaday Markii Saddex Kulan Oo Isku Xiga Uu Badan Kari Waayey
HomeSpainAncelotti Oo Calaacal Miciinsaday Markii Saddex Kulan Oo Isku Xiga Uu Badan Kari Waayey
12/05/2014 Abdiwahab Ahmed
Tababaraha kooxda Real Madrid, Calo Ancelotti ayaa ka soo bandhigay dawakhaad uu ka qaaday kooxdiisa markii guuldarro fool xun oo kale ay ku habsatay, iyadoo 2-0 ay ku garaacday Celta Vigo oo ka mid ah kooxaha ugu liita horyaalka.
Kooxda ka dhisan Santiago Bernabeu ayaa waxa ay geli lahayd kaalinta labaad haddii ay guulaysan lahayd kulankii xalay, waxaanay ka sare mari lahayd Barcelona, iyadoo natiijada ka soo baxda kulanka Barca vs Atletico uu go’aamin lahaa mustaqbalkeeda sannadkan ee horyaalka, laakiin natiijada kulanka Celta Vigo, waxa uu u dhameeyey rajadii Real.
“Waanu niyad jabsanahay oo waxaanu weynay La Liga. Waa tartankii ugu horreeyey xili-ciyaareedkan ee aannaan ku guulaysan doonin, waana arrin xun” ayuu yidhi Ancelotti oo shir-jaraa’id qabtay markii ay ciyaartu dhamaatay.
Carlo Ancelotti waxa uu sheegay in raxan ciyaartooyadiisa muhiimka ahi ay ka maqnaayeen kulanka Celta Vigo, waxaanu yidhi “Waxa naga maqnaa ciyaartooyo dhawr ah oo muhiim ah, markaa may sahlanayn in aanu isu diyaarinno kulankan. Waxa aanu isku dhiibnay laba gool si fudud, laakiin waxa aanu isku daynay in aanu ka daba nimaadno.
“Ma dafirsanin in aanaan si fiican u ciyaarin kulamadii ugu dambeeyey, laakiin ma rumaysni in aanu annaga iskaga hadhnay La Liga. Waxa aanu luminnay awooddii kadib Semi-faynalkii Champions League, waana ta noogu wacan guul-darradan” ayuu raaciyey.
Hadda horyaalku wuu dhamaaday, wax rajo ahna ma qabto Real Madrid, laakiin tababare Ancelotti waxa uu tibaaxay inay ka fikirayaan mustaqbalka, ayna dhinaca isaga dhigeen wixii gaadhay kulamadii u dambeeyey. “Hadda waa in aanu fiirinno mustaqbalka, aanu dib u soo celinno dedaalkii oo aanu isku diyaarino faynalka (Champions League)”
Real Madrid waxa ay kulankeeda ugu dambeeya ee horyaalka sannadkan la ciyaari doontaa Espanyol, kadib waxay 24-ka bishan isku muruxsan doonaan Atletico Madrid oo ay isugu soo hadheen faynalka Champions League.
Benzema Iyo Real Madrid Oo Qalinka Ku Wada Duugey Qandaraas Cusub